GADZIRISA FILE EXPLORER HAIZOVHURE MUKATI WINDOWS 10 - NYORO
Gadzirisa File Explorer haizovhure muWindows 10
Windows 10 ndiyo yazvino inoshanda sisitimu yakaburitswa ne Microsoft, asi haina bug-isina, uye imwe yeiyi bug mukati Windows 10 File Explorer haizovhure, kana kuti haizopindure kana iwe uchizobaya pairi. Fungidzira Windows pausingakwanise kuwana mafaera ako uye dhairekitori, iko kushandiswa kwei kwakadai sisitimu. Zvakanaka, Microsoft ine nguva yakaoma yekuchengeta track yezvinhu zvese ne Windows 10.
ndinoita sei nemaoko kuisa windows 10 kugadzirisa?
Nei File Explorer isiri kupindura?
Maitiro ekugadzirisa File Explorer haivhure mukati Windows 10 nyaya?
Maitiro 1: Disable Startup Zvinhu
Maitiro 2: Mhanya Windows Mune Yakachena Boot
Maitiro 3: Gadza Windows Kuyera ku100%
Maitiro 4: Dzorerazve Mapurogiramu kuMicrosoft Default
Maitiro 5: Tangazve File Explorer muTask Manager
Maitiro 6: Bvisa File Explorer Cache
Maitiro 7: Disable Windows Tsvaga
Maitiro 8: Mhanya netsh uye winsock reset
Maitiro 9: Mhanya Sisitimu File Checker (SFC) uye Tarisa Disiki (CHKDSK)
Maitiro 10: Mhanya DISM (Kutumirwa Kwemifananidzo Sevhisi uye manejimendi)
Maitiro 11: Ita shuwa kuti Windows yasvika parizvino
Chikonzero chikuru cheiyi nyaya chinoratidzika kunge zvirongwa zvekutanga izvo zvinopesana nazvo Windows 10 Faira Explorer. Zvakare, kune zvimwe zvakawanda nyaya zvinogona kumisa vashandisi kuwana File Explorer senge Scaling Slider nyaya, File Explorer cache dambudziko, Windows yekutsvaga gakava nezvimwe zvakadaro, zvinoenderana chaizvo nevashandisi sisitimu yekumisikidza kuti nei iri dambudziko richiitika pane yavo system .
Kuremadza Windows Startup Zvirongwa kunogona kukubatsira kugadzirisa iyi nyaya, uye zvaizokubatsira iwe mukugadzirisa dambudziko. Wobva wagonesa zvakare mapurogiramu rimwe nerimwe kuti uone kuti nderipi riri kukonzera dambudziko iri. Dzimwe gadziriso dzinosanganisira kuremadza kutsvaga kweWindows, kuisa chinotsvedza ku100%, kujekesa File Explorer Cache nezvimwe.saka pasina kutambisa nguva, regai tione kuti tingagadzirisa sei nyaya iyi paWindows 10.
1. Dhinda Ctrl + Shift + Esc kuvhura Task Manager .
2. Tevere, enda ku Kutanga Tab uye Disable zvese.
3. Unofanirwa kuenda rimwe nerimwe sezvo iwe usingakwanise kusarudza ese masevhisi mune imwe nzira.
4. Reboot PC yako uye ona kana uchigona kuwana Faira Explorer.
5. Kana iwe uchikwanisa kuvhura File Explorer pasina dambudziko ipapo zvakare enda kuKutanga tebhu uye wotangazve kugonesa masevhisi rimwe nerimwe kuti uzive chirongwa chiri kukonzera nyaya.
6. Paunenge iwe uchinge waziva iko kunokanganisa, uninstall iyo chaiyo application kana kuremadza zvachose iyo app.
Dzimwe nguva 3rd party software inogona kunetsana neWindows Store uye nekudaro, haufanire kuisa chero maapplication kubva kuWindows apps chitoro. Gadzirisa File Explorer haizovhure muWindows 10 , unofanirwa ita bhutsu yakachena muPC yako uye wongorora nyaya nhanho.
1. Right-tinya Desktop uye sarudza Ratidza Zvirongwa.
2. Chinja iyo saizi yemavara, maapplication, uye zvimwe zvinhu zvinotsvedza ( kuwedzera chinotsvedza ) pasi kusvika ku100%, wobva wadzvanya kunyorera.
3. Kana File Explorer richishanda zvekare dzokera ku Ratidza Zvirongwa.
4. Iye zvino zvinokura gadzirisa saizi yako yekukwirisa slider kune yakakwira kukosha.
Chinja chinotsvedza chinowedzera kunge chinoshanda kune vazhinji vashandisi ku Gadzirisa File Explorer haizovhure muWindows 10 asi zvinoenderana nesisitimu sisitimu yekumisikidza, saka kana nzira iyi isina kukushandira enda mberi.
1. Dhinda Windows Key + ini kuti ndivhure Windows Zvirongwa wobva wadzvanya System.
chrome haina mahwindo anonzwika 10
2. Zvino famba uchienda Default maapplication muhwindo rewindo rekuruboshwe.
3. Mupumburu pasi uye tinya reset kuMicrosoft yakakurudzira zvisizvo .
4. Dzorera PC yako kuchengetedza shanduko.
1. Dhinda Ctrl + Shift + Esc kutanga Task Manager.
2. Tsvaga Windows Explorer mune rondedzero wobva wadzvanya-kurudyi kwariri.
3. Sarudza End basa kuvhara iyo Explorer.
4. Pamusoro pe Task Manager hwindo , tinya Faira> Mhanya basa nyowani.
5. Type mukurumari.exe ndokurova Enter.
1. Right Faira Explorer icon pabhara rebasa wobva wadzvanya Tambanudza kubva kubha rebasa.
2. Dhinda Windows Key + X wobva wadzvanya Faira Explorer.
3. Tevere, Tinya-kurudyi Kurumidza Kuwana uye sarudza Sarudzo.
maikorofoni isiri kushanda mushure windows 10 kugadzirisa
4. Dzvanya iyo Zvakajeka bhatani pazasi Kuvanzika muzasi.
5. Ikozvino tinya-kurudyi pane a nzvimbo isina chinhu pane desktop uye sarudza Nyowani> Pfupiso.
6. Nyora kero inotevera munzvimbo iyi: C: Windows Explorer .exe
7. Dzvanya Inotevera uye wozotumidza zita faira racho Faira Explorer uye tinya Pedza .
8. Dzvanya-kurudyi Faira Explorer nzira pfupi yawakangogadzira nekusarudza Pini kubharaki rebasa .
9. Kana iwe usingakwanise kuwana iyo File Explorer kuburikidza nenzira iri pamusoro, ipapo enda kunhanho inotevera.
10. Enda ku Control Panel> Chitarisiko & Kujairira> Faira Explorer Sarudzo.
11. Pasi peKushamisika kudzvanya Bvisa File Explorer Nhoroondo.
Kuchenesa File Explorer Nhoroondo zvinoita kunge Gadzirisa File Explorer haizovhure muWindows 10 asi kana iwe uchiri kutadza kugadzirisa iyo Explorer nyaya wobva waenderera nenzira inotevera.
1. Dhinda Windows Key + R wobva wonyora services.msc ndokurova Enter.
2. Tsvaga Kutsvaga kweWindows mune rondedzero uye tinya kurudyi pairi wobva wasarudza Zvivakwa.
Zano: Dhinda W pabhobhoyo kuti usvike zviri nyore Windows Gadziriso.
3. Zvino chinja Startup mhando kuti Akaremara wobva wadzvanya OK.
1. Dhinda Windows Key + X wobva wasarudza Command Prompt (Admin).
2.Zvino nyora unotevera kuraira uye rova ​​Enter mushure meumwe neumwe:
windows 10 isina kujairika internet disconnect
3. Ona kana dambudziko ragadziriswa, kana zvisiri izvo woenderera mberi.
Iyo sfc / scannow command (System File Checker) inoongorora kuvimbika kweese akachengetedzwa Windows system mafaera. Iyo inotsiva zvisirizvo zvakashatiswa, kushandurwa / kushandurwa, kana kukanganiswa vhezheni ine chaiyo vhezheni kana zvichikwanisika
1. Vhura Command Prompt nekodzero dzeHurumende .
2.Zvino mu cmd hwindo nyora unotevera kuraira uye rova ​​Enter:
3. Mirira system file checker kuti ipedze.
4. Tevere, mhanya CHKDSK kubva Gadzirisa Faira Sisitimu Zvikanganiso ne Check Disk Utility (CHKDSK) .
5. Rega maitiro ari pamusoro apedze kusvika Gadzirisa File Explorer haizovhure muWindows 10.
6. Zvekare reboot PC yako kuchengetedza shanduko.
Pinda unotevera kuraira mu cmd uye rova ​​pinda:
Zvakakosha: Paunenge DISM iwe unofanirwa kuve neWindows Installation Media yakagadzirira.
Ongorora: Tsiva iyo C: RepairSourceWindows nenzvimbo yekugadzirisa kwako
wifi wont batidza Android foni
3. Dzvanya pinda kuti umhanye iwo wepamusoro kuraira uye mirira kuti maitiro apedze; kazhinji, zvinotora maminetsi gumi nemashanu.
4. Mushure mekuita kweDISM kwapera, nyora zvinotevera mu cmd uye rova ​​Enter: sfc / scannow
5. Rega System File Checker imhanye uye kana yapera, tangazve PC yako.
1. Dhinda Windows Kiyi + Ini kuti ndivhure Zvirongwa wobva wadzvanya pa Kwidziridzo & Chengetedzo.
2. Kubva kuruboshwe-kurudyi, menyu tinya pane Windows Gadziridza.
3. Zvino tinya pane iyo Tarisa uone zvekuvandudzwa bhatani kutarisa chero zviripo zviripo.
4. Kana paine zvigadziriso zvakamirira, tinya pa Dhawunirodha & Isa zvidzoreso.
5. Kana zvadzoserwa zvadzokororwa, zviise, uye Windows yako ichave inoenderana.
Gadzirisa Microsoft Edge Haigone kuvhurwa uchishandisa yakavakirwa-mukati Administrator Akaunti
Maitiro ekugadzirisa App haigone kuvhura uchishandisa Yakavakirwa-mukati Administrator Akaunti
Steam lags kana uchitsvaga chinhu [SOLVED]
Troubleshoot Windows Dzokorora yakanamatira kurodha pasi inogadziridza
Ndikwo kuti wabudirira Gadzirisa File Explorer haizovhure muWindows 10 asi kana uchine chero mibvunzo maererano neichi posvo inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
maitirwo eGoogle nekukurumidza
windows 10 vhezheni 1709 haizo gadza
maitiro ekugadzirisa zvakakomba kukanganisa kutanga menyu uye cortana
windows 10 Edge browser haina kushanda
windows 10 kukwidziridzwa kwakanamatira 99
windows irql kwete zvishoma kana kuenzana
dzorera kumashure ekupedzisira windows 10 kugadzirisa